Vaovao - Ny tombony sy ny fiantraikan'ny hodi-tangerine
Tan peeldia mahazatra kokoa amin'ny fiainana andavanandro ary azo alaina mivantana amin'ny rano na ampangotrahina ho decoction, izay mahasoa ara-pahasalamana maro.ankehitrinyFuyang Bestophiresaka momba izany aminao.
Inona no vokatry ny hodi-tangerine?
1.Peel voasarydia misy fiantraikany amin'ny fandevonan-kanina, indrindra satria misy menaka mivaingana, hesperidin sy singa hafa, izay afaka mandrisika moramora ny taratasy mivalona amin'ny tsinay, manafaingana ny secretion ny fandevonan-kanina juices, raha ny fanafoanana ara-potoana ny entona fanangonan-karena ao amin'ny tsinay lakandrano, ka mampitombo ny fahazotoan'ny olona; ary ny singa mangidy toy ny voasarimakirana ao amin'ny hodi-boasary dia afaka mampiroborobo ny hafainganam-pandehan'ny peristalsis tsinay, ka mampiroborobo ny vokatry ny fandevonan-kanina.
2.Hodi-boasary makiranadia afaka manana tombony amin'ny famahana ny phlegm sy ny fanalefahana ny kohaka, satria misy akora voajanahary manohitra ny inflammatoire izay afaka manampy antsika hanafoana ny areti-maso ao amin'ny havokavoka sy ny lalan-drivotra, ka manalefaka ny phlegm ary mamela azy hivoaka haingana kokoa. menaka singa afaka manentana ny taovam-pisefoana sy mampihena ny matetika ny kohaka.Raha mazàna ianao mahatsapa be ny phlegm, dia afaka manomana hodi-boasary makirana, sakamalaho sy walnuts, dia ampio rano araka ny tokony ho izy ary maka decoction, izay mety hisy fiantraikany amin`ny famongorana phlegm.Ho an'ireo voan'ny bronchitis dia azonao atao ihany koa ny manadio ny hodiny ary misotro azy mba hanatsara ny bronchitis.
3.Ny hodi-boasarydia manana fiantraikany mampidina lipida satria misy glycosides be dia be, izay afaka misoroka tsara ny fihetsiky ny peroxidation lipida.Mandritra izany fotoana izany, ny pectin ao amin'ny peel dia misy akora molekiola ambany sasany izay afaka mampihena tsara ny haavon'ny lipida ao amin'ny vatana.Raha manana lipida avo lenta ianao dia matetika afaka mihinana hodi-kazo mety.
Na dia betsaka aza ny herin'ny hodi-boasary, tsy ny rehetra no afaka mihinana azy, indrindra fa amin'ireo sokajy 4 ireo dia tokony ho mailo ny fisorohana.
1. Ny olona voan'ny tazo, ny fitohanana ary ny vava maina dia tsy asaina mihinana ny hodi-boasary, izay mety hitarika ho amin'ny areti-maso sy hampitombo ny toe-javatra.
2. Satria ny hoditra dia misy fiantraikany amin'ny fanamainana hamandoana, ny olona voan'ny kohaka maina, ny afo amin'ny vavony ary ny tsy fahampian'ny qi dia tokony handray izany amim-pitandremana satria mety hanimba ny fahasalamany izany.
3. Ireo olona mihinana fanafody sasany ary te hampiasa hodi-boasary amin'ny rano dia asaina manatona dokotera aloha, satria mety hisy fiantraikany amin'ny enzymes fanafody izany ary noho izany ny fahombiazan'ny fanafody.
4. Tokony hitandrina tsara ny vehivavy bevohoka rehefa mihinana hodi-boasary.Ny olona sasany dia hiaina maloiloy sy mandoa ary tsy mazoto homana mandritra ny fitondrana vohoka, ary ny hoditry ny voasary dia afaka manatsara tsara ireo soritr'aretina ireo, noho izany dia maro ny vehivavy bevohoka no misafidy ny hihinana hodi-boasary.Na izany aza, manoro hevitra ny vehivavy bevohoka mba handinika bebe kokoa rehefa mihinana hodi-boasary, indrindra raha ny vatany dia trangan'ny tsy fahampian'ny Qi sy ny fahamainana na ny tsy fahampian'ny Yin sy ny kohaka maina, ary ny vatany dia miaraka amin'ny hafanana mafy sy ny rà mandoa, raha mihinana izy ireo. voasary peel, dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin`ny foetus.
Ahoana ny fampiasana tsara ny hodi-boasary?
1. Tsy azo atao ny maka ny hodi-boasary amin'ny rano isan'andro, satria mety hiteraka afo izany, indrindra ho an'ireo izay manana ny tsy fahampian'ny Yin sy ny hafanana anatiny.Amin'ny ankapobeny dia ampy indroa na intelo isan-kerinandro.
2. Raha te hitsabo aretina sasany amin'ny fanampian'ny volom-boasary ianao, dia tsara kokoa ny manao izany eo ambany fitarihan'ny dokotera, satria misy fepetra hentitra amin'ny fampifangaroana ny hoditra voasary sy ny dosage.
Ity dia momba ny fampidirana hodi-boasary makirana, manantena i Fuyang Bestop fa hahazo zavatra ianao rehefa avy mamaky ny fampidirana etsy ambony.
Raha liana amin'ny voasary ianao dia mifandraisa aminayinfo@goherbal.cnFARAN'IZAY HAINGANA INDRINDRA.